उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नं ३,‘क’ प्रदेश सभा
छिरिङ दोर्जे लामा नेपाली कांग्रेसको युवा नेताका रुपमा परिचित छन् । नेपाल विद्यर्थी संघको विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा आएका यी ४० वर्षे युवा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र ३ ‘क’ बाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा छन् । भूगर्व शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दोर्जेले नेविसंघको सह–महामन्त्री, कांग्रेस काठमाडौ जिल्ला कार्यसमिति सदस्य र वौद्ध नाथ विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरि सकेका छन् । पहिलो पटक सांसदका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका दोर्जे आफू सुरक्षित र जित निश्चित रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग अमरवाणी डटकमले चुनावी तयारी, चुनावको माहोल, विकासका एजेन्डा र क्षेत्रको संम्वृद्धिका लागि चाल्ने भावी कदममा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानीः
घरदैलो अभियान सकिसक्नु भएको छ, चुनावी माहोल कस्तो छ ?
घरदैलो औपचारिक रुपमा सकिएको छ, हामीले जनताको घरघर पुगेर भोट माग्ने काम सकेपनि अनौपचारिक रुपमा निर्वाचन नसकिएसम्म निर्वाचन आचारसंहिता भित्र रहेर हामी जनतासँग सम्पर्कमै हुन्छौं । मेरो क्षेत्रमा माहोल राम्रो छ, कांग्रेसको विजयी सुनिश्चित छ । किन भने यस क्षेत्रमा प्रतिपक्षी भन्दा हामी निकै अगाडि छौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ६, गोकर्णेश्वरको ५ र ९ वडामा यस अघिको स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले नै जित हासिल गरेको थियो ।
जनता नेताले चुनावका बेला आश्वासन बाडने बाहेक केही काम नगरेको आरोप लगाइरहेका छन्,यसमा कतिको सत्यता छ ?
यसमा सत्यता छैन म भन्दिनँ । तर, केही पनि नभएको पनि होइन । विकास एकै चोटी जादूका भरमा हुने चीज पनि होइन यो निरन्तर प्रक्रिया हो, हामीले जनतालाई यो बुझाएका छौं । दुइ दशक देखि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको थिएन । अहिले चुनाव भएको छ, साथीहरु चुनिएर आएको पनि धेरै भएको छैन, स्थानीय स्तरमा योजना बन्दैछन् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो, सडक र युवा स्वरोजगारीका लागि हामी सक्रियता पूर्वक काम गरिरहेका छौं । काम पक्रियामै भएका कारण परिणाम आइसकेको छैन छिट्टै स्थानीयले विकासको अनुभूत गर्ने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु ।
तपाई विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिमा आउनु भयो, प्रदेश सभा उम्मेदवार बन्नु भएको छ, के कस्ता चुनौती देख्नु भएको छ यसमा ?
मुलुक संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो स्टेपमा छ, यो वास्तवमै चुनौतीपूर्ण र कठिन कार्य छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान निर्माण भएको र कार्यान्वयनका लागि पनि जनताले हामीलाई नै अनुमोदन गर्ने छन भन्नेमा पार्टी ढुक्क छ । कदापी त्यस्तो हुन नसकेमा भोलि दुर्घटना नहोला भन्ने पनि छैन् । मैले त भन्ने पनि गरेको छु संघीयता फापेमा वरदान न नफापे यो अभिसाप हुन सक्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताले कांग्रेसलाई जिताउनु अपरिहार्य छ । भोलिका दिनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुन बन्नुपर्ने,संरचना निर्माण देखि प्रशासनिक बाँडफाँटमा पनि कस्सिएर काम गर्नुपर्ने छ । त्यसैले ‘थपडी’ बजाउने उम्मेदवार रोज्ने कि शिक्षित योग्य र सक्षम युवा उम्मेदवार रोज्ने । यो प्रश्न जनताले मनन गर्ने बेला आएको छ ।
यो क्षेत्रमा विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने बौद्ध नाथ, वागमति नदी संरक्षण स्थल र सहिद पार्कको केही क्षेत्र पर्दछ,यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने तपाईको योजना के छ ?
बौद्ध नाथ संसारकै परिचित तीर्थ स्थल हो । यसलाई २४ घण्टा पर्यटक मैत्री वातावरण बनाएर खुला राख्न सकिन्छ । बौद्ध दर्शन र यसका विधिका बारे संसारका अध्येताको ध्यान खिच्न सकिन्छ । ठमेलकै मोडलमा जान सकिन्छ । म ४ वर्ष बौद्ध विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक भएँ । त्यतिबेलै हामीले बौद्ध घुम्न आउने पर्यटकलाई सहिद पार्कसम्म पुर्याउन साइकल ट्रयाकको अवधारणा बनाएका थियौं । यो काम अब जरुरी भइसकेको छ । शिवपुरीमा केवलकार चलाउन निजी क्षेत्रले खोजी रहेको छ, त्यसलाई हामीले हातेमालो गर्नुपर्छ । वाग्मति नदी संरक्षण सहिद पार्कको प्रवद्र्धन देखि लिएर युवा स्वरोजगारका कामहरु अति नै जरुरी छ ।
बौद्ध क्षेत्र बेलाबखत सुरक्षा कारण पनि चर्चामा आउने गर्छ, नागरिक सुरक्षाको योजनो कस्तो छ ?
सुरक्षा व्यवस्था अति नै आवश्यक विषय हो । सबै नागरिकको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने दायित्व राज्यको हो । बौद्धको सुरक्षा अहिले प्रहरी प्रभाग बौद्धको नेतृत्वमा केही विट मार्फत हुँदै आएको छ । यो थप्नु पर्ने भए थप गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी पहल गर्छौ । अर्को अहिले प्रहरी प्रभाग रहेको क्षेत्र सडक विस्तारमा परेको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक जग्गा खोजी भइरहेको छ ।
काठमाडौ वरपरको ‘काठ’ क्षेत्र जुन परम्पराको प्रतीक पनि मानिन्छ, यो मासिन लागेको चिन्ता छ, त्यसक्षेत्रको मौलिकता कसरी जोगाउने ?
पक्कै पनि ‘काठ’ क्षेत्र काठमाडौंको परम्पराको धरोहर हो । वढ्दो सहरीकरणले कतिपय रितिथिती संकटमा पुगेको अवस्था छ । हिजो भद्रवासमा जति दूध उत्पादन हुन्थ्यो । त्यससको १० प्रतिशत पनि अहिले हुँदैन् । धामिृक विधि मान्न सार्वजनिक स्थल छैन । मैले घरदैलोका क्रममा ९९ वर्षका बा भेटे उहाँको चिन्ता पनि यस्तै थियो । सार्वजनिक स्थल, वृद्धाश्रम पाटी पौव संरक्षण जरुरी छ गर्नु पर्छ हामी गर्छौ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनसक्छन् । तर, धर्म संस्कृति गुमेमा त्यो फर्काउन सकिदैन् ।
प्रकाशित १७ मङ्गसिर २0७४ , आइतबार | 2017-12-03 11:23:20